I Anja Schaap dia maty teo ambonin'ny ranomasina teo ambonin'ny Nosy Wadden, saingy iza no sambo (myshiptracking.com)? : Martin Vrijland
Vaovao malaza omaly, satria i Anja Schaap dia hita maty tany an-dranomasina. Tsy ranomasina, fa ny Ranomasina Avaratra: ambonin'ireo nosy Wadden (araka ny tatitry ny media). Na izany aza, raha jerentsika ny tantaran'ny fandefasana amin'ny andro sy ny fotoana hitany (18 June 13: ora 30), dia tsy misy sambo mipetraka ao mihitsy. Tsy misy na inona na inona amin'ny tantaram-pitadiavana azo atao ny mahita sambo iray avy any amin'ny morontsiraka mpiambina mijery any amin'ny sambo alemà (mety ho hitan'i Anja). Toa mihamazava hatrany fa mifandray amin'ny PsyOp isika (fiasa ara-tsaina).
Ny sambo rehetra dia tsy maintsy manana traktera GPS mitovy aminy (iray AIS rafitra), mba hahafahan'ny mpiambina ny morontsiraka mahita izay atao any an-dranomasina. Azonao atao ny mampitaha izany amin'ny fandefasana ny fiaramanidina amin'ny seranam-piaramanidina. Mijery ny tranonkala izahay myshiptracking.com dia amin'ny 18 June 13: ora ora 30 dia misy sambo marobe hita eo anelanelan'ny Nosy Wadden sy Friesland. Ireo sambo vitsivitsy izay hita eo ambonin'ny Nosy Wadden (izay toerana nahitana azy ireo) dia nivezivezy manodidina ny kibon'ny 9 (na mihoatra) na nandeha lavitra sy haingana tamin'ny alàlan'ny alemà. Raha hitanao fa misy faty mitsingevana any an-dranomasina, dia toa mbola hihomehy ianao. Ankoatr'izany, tsy misy mpitaingina fiara na fitaovam-piavoan'ny mpamonjy voina. Ankoatra izany, afaka manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahanao manilika an'i Katwijk manoloana ny Ranomasin-dranomasina (raha izany no teoria) ary na dia azo atao aza ny manamarina ny vatana mangatsiaka (izay mipoitra fotsiny noho ny dingam-pandrenesana sy ny fananganana gazy ao amin'ny vatana) mba hahita ny ranomasina.
Lees ao amin'ity lahatsoratra ity ny fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fomba sy nahoana ity dia mety ho PsyOp hampidirana ny fampiharana an'i Sherlock Holmes. Tena mamaky izany!
Lisitry ny rohy loharano: myshiptracking.com, telecomabc.nl
Tags: active, Anja, App, sambo, sambo, fahafatesana, float, Featured, hita, GPS, Holmes, vatana, Ranomasina Avaratra, ondry, sambo, kapiteny, Sherlock, sobika, ampy, lay, sambo mpanjono, Nosy Anglisy, Ranomasina Wadden, inona, Zee
20 June 2019 ao amin'ny 11: 39
Heveriko fa mahafinaritra ny mahita olona manao akanjo mainty miposaka any an-dranomasina. Avy eo dia tokony hanana maso manirery ianao.
20 June 2019 ao amin'ny 23: 45
Fanabeazana: Ny fianakavian'i Schaap dia feno fankasitrahana ny ekipan'ny sambo satria naka an'i Anja nivoaka ny rano. "Nijanona niaraka taminy nandritra ny adiny telo ilay kapiteny mandra-pahatongany tamin'ny manampahefana tany.
Tsy maintsy nijanona ihany ny sambo iray, fara fahakeliny 3 ora tany amin'ny Ranomasina Avaratra nanodidina ny Nosy Wadden. Tsy izany no tranga ao amin'ny tantaran'ny myshiptracking.com.
20 June 2019 ao amin'ny 12: 28
Araka ny filazan'ny olom-pirenena tsara iray tsara (mamaky an-tsokosoko mpiasa) dia tokony hametraka ny Burger Net sy ny app Sherlock izy ary miasa ho fanitarana ny rafi-panjakana.
20 June 2019 ao amin'ny 17: 11
Efa fantatra ve ny fiantsoana ny sambo alemana, tarehimarika?
Raha sambon'i Madurodam izany dia mety ho ny Flying Dutchman, sa tsy izany?
Nahita vaovao momba izany ve ny TV Alemana ankehitriny fa sambo alemana? Angamba i De Mol afaka miantso ireo mpiara-miasa aminy Alemana momba izany, mandamina ny vaovao ho ohatra. Manome safidy malalaka ihany koa aho.
20 June 2019 ao amin'ny 19: 59
Tsara ho eritreretinao fa ny kapitenin-tsambo Alemana iray dia horaisina ho toy ny maherifo ary ho lasa paradisa amin'ny fampahalalam-baovao roa ... tsara ho an'ny fifandraisana, tsy misy an'izany.
Coordinate? Tsy manao zavatra hafa ho an'ireo olona ahiahina izy ireo, isika izao dia handeha hivoaka ny varavarana misokatra ho an'ny Sun izay mampivarahontsana ahy kely 😀
20 June 2019 ao amin'ny 19: 46
Ny Sheep 33 dia tsy eo intsony eny an-tanety intsony ary tsy nisy mihitsy mihitsy, zavatra mampalahelo.
21 June 2019 ao amin'ny 00: 17
Ny sehatra manaraka (jereo ny lahatsary eto ambany avy amin'ny 3: 25 min)?
1. Nalefa tany amin'ny Ranomasina Avaratra ny "Anja"
2. Ny mpitaingina alemà dia angamba ny mpamono azy
3. Namono tena i Anja tamin'ny nandroahana ny tenany
Ary mbola maro ny spinsel mbola azo eritreretina.
Ny fijerena ny Katwijkers fa ny zavatra tokony hosasana dia tsy maintsy resena. Fantatr'izy ireo ny ranomasina. Noho izany ity fampielezam-peo ity dia ahiahiko:
21 June 2019 ao amin'ny 00: 45
Ny haino aman-jery tahaka izany dia toa mitovy amin'ny olona misavoritaka.
Nigadra izy nandritra ny alina ary tao amin'ny trano fisakafoanana teo am-baravarankely sy ny kitapony tao anaty rano
Ary miresaka foana momba izany izy ireo, mandeha tsara ny fahasalamany ary mandeha tsara kokoa. Aleo lavitra azy.
Angamba izy nilomano nankeny amoron-dranomasina?
Mivoha ny sehatra rehetra.
Saingy ny zava-misy dia ny sarin'ireo Anja dia toa hafahafa avokoa.
Ary ny zava-misy dia ny namindràna ny mpifanila aminy tamin'ny horonan-tsary Tandrefana TV
Cat (vohitra) -Schaap-De Hond-Pauw, ny mahatsiaro mahazatra dia tsy afaka ny ampy fotsiny hitarika ny goyim adala manodidina ny zaridaina.
21 June 2019 ao amin'ny 00: 18
.. Mbola manadino ny De Mol amin'ny fientanam-po feno aho ... Efa saika feno ny zoo ao Madurodam
22 June 2019 ao amin'ny 22: 14
Ohatra amin'ny fomba famokarana ANSO ny Mol productions dia misy psiops miahiahy. mieritrereta an'i Poelenburg sy PowNed.
"Niahiahy ny polisy fa mpanohana an'i Pegida ireo mpanao gazety, saingy niasa ho an'ny ANP tany Eindhoven izy ireo."
23 June 2019 ao amin'ny 00: 57
Huh? Nahita karatra mpanao gazety ve ianao? Inona izany karatra izany? Karazana karatra izay manondro fa mifehy ny psyop ianao?
21 June 2019 ao amin'ny 09: 26
Madurodam na angamba Artis amin'ny anarana nomena ny biby be dia be izay mandehandeha eto.
21 June 2019 ao amin'ny 10: 16
Tsy amin'ny ankapobeny avokoa ireo biby rehetra ireo. Gerrit Zalm, Paul de Leeuw.
21 June 2019 ao amin'ny 10: 38
Ao anatin'ny iray amin'ireo avalin'ny sarimihetsika ao anatin'ity simulation ity (ny biby biby, izay ahafahan'ny 'biby' hosoloin'ny avatar), ny biby dia nandray fanapahan-kevitra tsara mba hampiseho fa ny goyim dia nilalao. Izany no mahatonga ireo avatars ireo, tarihin'ny sainam-pirenena Rosiana, miafina amin'ny anaran'ny biby.
Kiki nanoratra hoe:
21 June 2019 ao amin'ny 12: 16
Araka ny vaovao, nitoetra niaraka taminy nandritra ny ora maro ny kapiteny 3
3 ora dia 666 fa 3 * 60 = 18 1 + 8 = 9 momba ny nummorology 9 dia mifarana
Motifs fanontaniana lehibe marika ❔
Fanontaniana izay gnaw
Raha mbola velona izy dia afaka mitohy amin'ny maha-izy azy vaovao ...
Sherlock app sy fifandraisana amin'ity tranga ity?
21 June 2019 ao amin'ny 16: 59
Tsy fantatrao mihitsy hoe ahoana ny molia iray amin'ny ondry iray ...
Flitstra nanoratra hoe:
21 June 2019 ao amin'ny 23: 07
Misy sambo iray izay mikoriana ora maromaro any amin'ny morontsirak'i Vlieland ary izany dia sambo alemana Vertrouwen. https://www.marinetraffic.com/nl/ais/details/ships/211319670
Misy sambo telo antsoina hoe fitokisana fa avy amin'ireo làlana ireo ihany no mandalo amin'ny toerana eo amin'ny radar.
Amin'ny alàlan'ny 13: 30 dia mamela ny sambo rehefa avy nilomano manomboka ny maraina, ny ora 4 farany izay misy ny knots amin'ny 0.1 sy 0.2.
Tsy mifanaraka amin'ny hoe hita tamin'ny 13 ny vatany: 30 ary natolotra tamin'ny manam-pahefana ora telo taty aoriana.
Tsy mahita sambo hafa afa-tsy ny Trust izay mijanona ho an'ny Ranomasin-dranomasina tamin'izany andro izany aho.
22 June 2019 ao amin'ny 08: 58
Eny tokoa i Flitstra ivelan'ny tsy mifanaraka amin'ny fotoanany, ny toerana ihany koa dia tsy marina.
Voalaza ao amin'ny haino aman-jery fa nahita azy teo ambonin'ny nosy Schiermonnikoog ilay ekipa. jereo ny rohy eto ambany.
22 June 2019 ao amin'ny 14: 06
Ny mpandinika psyop Anass Aouragh ihany koa dia afaka manambara ny teniny ihany koa ... ary izany fironana izany: eny, azo antoka fa azo atao izany:
23 June 2019 ao amin'ny 11: 25
Ah, be dia be ny miteny sy manoratra momba azy ireo.
Na dia izany aza, miaina anaty didy jadona mangina, marefo, mikiakiaka isika
izay ahitan'ireo ankizilahy avy ao amin'ny script ny Animal Farm ary ny mpanompo dia mihevitra fa tsara izany.
Miaro ny tompony ireo andevo.
« Anja Schaap no nahita fatin'ny alemana maty tany an-dranomasina? Azo atao ve izany araka ny lalàn'ny natiora?
Tsy afaka mamaha ny olana eto amin'izao tontolo izao isika amin'ny alàlan'ny fisainana sy ny firesahana, fa amin'izany fomba izany: »
Total visits: 10.827.638
Zandi Eyes op Ahoana no fomba hitondrana ny fiovana lehibe raha 99% no tsy mananaina?